Kubviswa humhandara nenyoro kwakasiyanei nekubviswa neCondom? - Masasi eHarare
DzeBonde Kubviswa humhandara nenyoro kwakasiyanei nekubviswa neCondom?
Kana uri musi wako wekutanga kupinzwa mboro nemurume zvinoda kunzwisisa kuti zvinoitwa sei uye kuti uchanzwa sei pazviri. Zviri nani chose kushandisa kondom nekuti unokwanisa kubata zvirwere musi iwoyo. Kusvirana, zvikuru kana manga musina kumbosvirana kunoita mupanane zvirwere zvakasiyana siyana zvichibva nekuti murume ane zvipi zvacho.
Uchabvarurwa beche rako uye panokwanisa kubuda ropa kureva kuti pane karonda kadikidiki kanokwanisa kupinda hutachiona. Kondomu rinodzivirira zvirwere.
Unokwanisazve kuita nhumbu ipapo saka kondomu rinodzivirira pamuviri. Kana chivharo chako chakati korei, unokwanisa kurwadziwa zvishomanana sekuti wabaiwa netsono pakubvarurwa zvobva zvatopera otobatirira murume, worumira mazino motoisana. Pamwe unonakirwa musi wekutanga, pamwe hazvinaki kusvika wamboiswa kakawanda.
Kubviswa humhandara nenyoro